merolagani - नेपाल लाइफको एफपिओमा पहिलो दिनमा कति पर्यो आवेदन ?
नेपाल लाइफको एफपिओमा पहिलो दिनमा कति पर्यो आवेदन ?
Jan 12, 2017 merolagani
नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स (NLIC) को एफपीओमा आवेदन खुला गरेको पहिलो दिन बुधबारमा मात्रै तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । बुधबार एकै दिनमा २२ हजार आवेदनकर्ताबाट सो रकम बराबरको आवेदन परेको हो ।
बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका सुजन अधिकारीले मेरोलगानीसँग कुरा गर्दे पहिलो दिनमै तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि एफपीओमा आवेदन परेको जानकारी दिए । बुधबारभन्दा बिहीबार बिहानै देखि नै उल्लेख्य मात्रामा बिक्री केन्द्रहरूमा भीड लाग्न थालिसकेको देखिन्छ । यसको आधारमा विहिबार आवेदन रकम अझ बढ्ने देखिन्छ ।
नेपाल लाईफले प्रति कित्ता १४२५ रुपैयाँका दरले ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता एफपीओको पुस २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको एफपीओमा छिटोमा माघ २ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ । कम्पनीले एक सय फेस भ्यालुमा १३२५ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता १४२५ रुपैयाँमा एफपीओ निश्काशन गरेको हो ।
नेपाल लाईफको एफपीओमा न्यूनतम १० कित्ता अर्थात १४ हजार दुई सय ५० रुपैयादेखि र अधिकतम ३० हजार नौ सय ६० कित्ताको चार करोड ४१ लख १८ हजार रुपैंयाँसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।
लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल लाइफको काठमाडौ शाखा हेरिटेज प्लाज तथा सिद्धार्थ बैंकका सबै शाखा कार्यालय मार्फत आवेदन लिन र बुझाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै लक्ष्मी क्यापिटल नयाँ वानेश्वर, एनआईबिएल क्यापिटल लाजिम्पाट,कृति क्यापिटल सुन्धारा, काठमाडौ क्यापिटल कमलादी,एस क्यापिटल,सिबिआईएल क्यापिटल तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल जमलबाट पनि लगानीकर्ताले आवेदन गर्न पाउनेछन् ।
ईन्योरेन्सको कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ रहेको छ । एफपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्तापूजीँ दुई अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ ।
कम्पनीले एफपीओ बिक्रीबाट आउने थप एक हजार तीन सय २५ रुपैयाँ प्रिमियमबाट संकलन भएको रकम रिजर्भ कोषमा जम्मा हुनेछ । एफपीओपछि कम्पनीको रिजर्भ कोषमा ६ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ जम्मा हुनेछ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १५ प्रतिशत बोनस सूचीकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिहीबार इन्भेष्टमेन्ट बैंक (NIB) को एक करोड ४० लाख ५२ हजार २०१ दशमलव ३५ कित्ता बोनस सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत अार्थिक बर्षमा वितरण गरेकाे बाेनस सूचीकरण गराएकाे हाे ।
अल्पकालीन कारोबारीको चंगुलमा सेयरबजार, जस्तो वृद्धि उस्तै गिरावट
एनएमबी बैंकको यसकारण बढ्यो प्रतिसेयर आम्दानी
दश रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको सिभिल लघुवित्तको सेयरमूल्य ८६ गुणा बढी
बलिया विकास बैंकहरु गाभेको जनता बैंकको यस्तो प्रगतिलाई कसरी बुझ्ने ?
स्टान्डर्ड चार्टडलाई निक्षेप जोगाउन सकस, ब्याज खर्च दोब्बर हुँदा पनि ४२ प्रतिशतले बढायो नाफा